Javanese, bisadda ugu jacaylka badan | Bisadaha Noti
Sawir - Catbreedselector.com
Bisadda Javanese waa xayawaan la yaab leh oo si fudud ula qabsada ku noolaanshaha guri dabaq ah iyo inaad ubaahantahay kali kicin badan, marka lagu daro nafaqada kugufilan, inaad reerka kula faraxdo.
Haddii aad tahay mid ka mid ah kuwa doonaya inay yeeshaan saaxiib naxariis badan oo kalgacal leh oo waliba leh timo dhaadheer oo jilicsan, Javanese waa bisadda ku habboon ee aad raadineyso.
1 Asalka iyo taariikhda Javanese
2 Maxay yihiin astaamaha lagu garto jirka?
3 Waa sidee dhaqankoodu?
4 Sidee loo daryeelaa bisadda Javanese?
5 Immisa ayey ku kacaysaa bisadda Javanese?
Asalka iyo taariikhda Javanese
Sawir - Javanescat.com
Inkasta oo laga soo horjeedo laga yaabo inay soo baxaan, Noocani kama yimaado jasiiradda Java sida magaceedaba laga dheehan karo, laakiin waa inuu ka yimaadaa kuwa ku abtirsada Ingiriiska oo ka gudbay bisadaha Bariga Shorthair ee leh Balinese qiyaastii 1960. Marka lagu daro Javanese, magac uu abuuray mid ka mid ah dadkii ugu horreeyay ee soo xulay kittens-ka ugu fiican, waxaa sidoo kale loo yaqaan Mandarin ama Oriental Longhair.
Maxay yihiin astaamaha lagu garto jirka?
Waa bisad dhex dhexaad ah, oo leh a miisaanka u dhexeeya 4 iyo 6 kiilo. Jidhku si fiican ayuu isugu dheellitiran yahay, muruqsan yahay, khafiifsan yahay, oo leh timo nus-dheer, ganaax iyo xiiq leh oo ilaaliya. Tani waxay noqon kartaa hal midab, qoolley, taby, taby lacag ah, van, harlequin, qiiq, midabbo.
Madaxiisu waa qaab saddex-geesood ah, oo leh aalad yar oo dherer ah iyo dhagaha oo wax yar u janjeera dhinacyada. Indhuhu waa kuwo dhex dhexaad ah, oo midabkiisu midab yahay. Lugihiisu waa kuwo adag, oo dabada ayaa aad u dheer oo dhuuban.
Leh a cimriga nolosha 14-18 sano.
Waa sidee dhaqankoodu?
Sawir - Linkbeef.com
Si fudud waa bisad jacayl 🙂. Aad u jecel, wuxuu had iyo jeer weydiistaa dadkeeda in fiiro gaar ah la siiyo. Intaas waxaa sii dheer, waa a xiriir weyn, si aad u badan si ay u fududahay in la ogaado waxa uu doonayo iyo / ama uu dareemayo oo keliya dhageysigiisa. Sidoo kale waa aad u caqli badan, Kumaa waxaad ku bari kartaa tabo kala duwan qaab fudud.
Si wanaagsan ayey ula wadaagi karaan waayeelka iyo carruurta labadaba, laakiin waxaa aad muhiim u ah in labaduba ay ixtiraamaan xayawaanka oo aysan dabada iyo dhagaha ka jiidan, oo ay si ixtiraam leh ula ciyaaraan.
Sidee loo daryeelaa bisadda Javanese?
Bakhaarada xayawaanka waxaad ka heli doontaa dhowr nooc oo ah cunnada bisadaha: cuntada qalalan, cuntada qoyan, iyo xitaa waxay yeelan karaan kuwa dabiiciga ah sida Summum ama Yum Diet. Dhammaantood, illaa iyo inta aysan haysan badar, waxay xulasho wanaagsan u noqon doonaan bisaddaada Javanese. Xitaa waad dooran kartaa inaad siiso cunnada guryaha lagu sameeyo (ama Barf), haddii aad la xiriiri karto nafaqo yaqaan fahamsan quudinta doofaarka.
Maxay tahay sababta bisadda Javanese loo siin waayey dalaggu? Hal sabab oo fudud: waxay sababi kartaa xasaasiyad. Bisaduhu waa hilib cunno, mana heystaan ​​enzym-yada lagama maarmaanka u ah inay si sax ah u milmi karaan bariiska, galleyda, ... marka la soo gaabiyo, noocyada maaddooyinkaas. Sidoo kale, haddii cunto la siiyo hadhuudh-aan lahayn, jaakadoodu way dhalaali doontaa, caafimaadkooduna wuu fiicnaan doonaa.
Aynu ka wada hadalno waxaaga timo. Tani way dheertahay, markaa waa inaad cadayato maalin kasta. Ujeedadaas awgeed waad u isticmaali kartaa burush ama kaar, in kasta oo aan kugula talineyno FURminator (ama wax la mid ah) maxaa yeelay yeelashada cufnaanta adag iyo wada jirka, waxay ka saareysaa timo badan oo dhintay.
Ku saabsan iyaga indhahaHaddii aad aragto inaad hayso dheecaano sida legañas, si tartiib ah ugaga saar faashad qoyan (biyo). Isticmaal faashad il kasta, maxaa yeelay haddii mid ka mid ah labada jeermis qabo, waxaad u gudbin kartaa cudurka mid caafimaad qaba.
Ugu dambeyntiina, the dhegaha Waa inay dib u eegaan waqti ka waqti. Haddii aad aragto inay wasakh yihiin oo ur xun yihiin, la tasho dhakhtarkaaga xoolaha maxaa yeelay wuxuu ku dhici karaa otitis ama dhibaato kale.
Sawir - Petspyjamas.com
Ma laha cudurro walwal leh, marka laga reebo kuwa jinsi kasta oo kale uu yeelan karo, sida leukemia, hargab, iyo kuwo kale. Laakiin waxa ay tahay inaad marwalba maskaxda ku hayso waa in, dhererka timahaaga awgood, waa inaad cadayato maalin kasta si loo yareeyo khatarta ay yeelan karaan. kubadaha timaha. Haddii ay taasi dhacdo, waad xamili kartaa ama matagi kartaa, oo dhibaato ayaa kaa haysata saxarooshada.
Dabcan, haddii aad si lama filaan ah u aragto inuu hoos u dhacay, ama aad muujisay nooc ka mid ah raaxo-darrada, waa inaad la xiriirtaa dhakhtarka xoolaha sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah, gaar ahaan haddii aad ogaato inuu cuno wax ka yar, ay ku adag tahay naftiisa inuu nafisto, iyo / ama uu ka cabto xanuun.
Immisa ayey ku kacaysaa bisadda Javanese?
Haddii aad si buuxda u go'aansatay inaad iibsato bisad nooca Javanese ah, oo aad rabto inaad ogaato inta ay kugu kacayso, in ka badan ama ka yar, waa inaad ogaataa in qiimaha uu ku wareegsan yahay 800 euros. Dabcan, waxaa muhiim ah in eeydu ay ugu yaraan labo bilood jirsato, oo ay durba cuntaa cunnooyinka adag.
Sikastaba xaalku ha ahaadee, hadaad sugi kartid inuu seddex bilood sifiican ugu rogo, maxaa yeelay tani waxay yareyn doontaa qatarta ah inuu dhibaatooyin la kulmo taasoo ay ugu wacan tahay kalsooni darrada ku qabta muddada dhexe. Laakiin haa, laga soo bilaabo markuu siddeed toddobaad jirsaday illaa aad aakhirka gurigaaga geynaysid, waa inaad booqataa si uu kuu ogaado oo uu kalsooni u helo.
Javanese waa dhogor cajiib ah, miyaadan u malayn? Halkan waxaan idinkaga tagnay sawirro badan oo muujinaya sida ay u qurux badan tahay:
Sawir - Pawesomecats.com
Sawir - Vetstreet.com
Wadada buuxda ee maqaalka: Bisadaha Noti » Bisadaha » Javanese, bisadda ugu jecel